पाचन प्रक्रिया बिग्रिएको अवस्थामा के खाने ? - ज्ञानविज्ञान
मासु खान छाड्नुनका ६ फाइदा यस्ता छन्
हामीले खाएको खानादेखि लिएर आन्तरिक वा बाह्य रुपमा प्रतिक्रिया भई शरीरमा बेचैनी हुनु एलर्जी हो । एक वा विभिन्न बाह्य…
मिसाएर खान नहुने खानेकुरा यस प्रकार छन्
१. प्याज र दुधः प्याज र दुध पनि सँगै सेवन गर्नु हुँदैन । प्याजसँग दुध पिउँदा छालामा समस्या आउन सक्छ…